Author: Mole Fenrit
Dalka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu fidsan yahay bed Area ahaan dalkii Ia odhan jirey Maxmiyadda Somaliland oo tilmaan ahaan ku yaalla dhigaha Latitude 50 ilaa 30′ Waqooyiga Dhulbadhaha iyo loolka Longtitude 45′ ilaa Bariga; waxaanay soohdimihiisu ka kooban yihiin berriga 1 jasuradaha, biyaha gobolleed, dhulka iyo badaha hoostooda, hawada sare iyo xeebleyda Continental shelf.
Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta dasturka loo magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka. Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyay. Waxbarashadu waa mid u danaynaysa dadweynaha, kuna habaysan waayaha iyo deegaanka gaar ahaaneed ee bulshada Somaliland. Tilmaanta Guud ee Golaha. Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad.
sommaliland Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Inay qabtaan xil kale oo Qaran inta ay xilka Guddida hayaan. Maxamadaha ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda waxa nidaaminaya xeer gaar ah. Tirada Golaha iyo Doorashadusa. Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka hore ayaa sii wadi doona hawlaha ay u xil-saarnaayeen ilaa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka cusubi kala wareegaan xilka muddo bil ah gudaheed. Golaha Guurtidu waxa uu yeelanayaa Xoghaye aan xubin ka ahayn Golaha.
Waa inuusan dembi maxkamadi ku xukuntay ka gelin Qaranka Somaliland.
Waa inuu hantidiisa diiwaan geliyo. Guddida Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay: Kala-xadaynta ku tilmaaman faqradda 1aad ee qodobkan, waa inay noqoto mid suurta-gelisa isku filnaansho gobollada iyo degmooyinku ka gaadhaan dhinacyada adeegyada bulsho. Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin.
Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia xidhiidha waafaqsanaanta Dastuurka. Daryeelka Qaybaha Bulshada Baylahsan.
Qofna jagada Madaxweynaha ma qaban karo laba jeer wax ka badan. Inuu yahay xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin. Xeer baa caddaynaya sida lagu heli karo ama laga waayi karo jinsiyadda Somali land. Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Qofka xorriyadda looga qaaday fal-dembiyeed lagu eedeeyey awgeed, waxa uu xaq u Ieeyahay in lagu hor geeyo maxkamad 48 siddeed iyo afartan saacadood gudahood, laga bilaabo marka Ia qabtay.
Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka. Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Dawladeed, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana inay uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned.
Wasaaradda Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay fulinta go’aanada maamul ee ka soo baxa Guddida Cadaaladda. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada. Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada.
Xoghayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gole cusub.
Marka uu hawshii loo doortay u gudan kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo. Xubnaha Guddida Culimadu waa inay yeeshaan shuruudaha hoos ku qoran: Dastuurka ayaa ugu sarreeya xeerarka dalka, xeer kasta oo aan isaga waafaqsanaynina, waxa uu noqonayaa waxba kama-jiraan.
Xorriyadda Dhaq-dhaqaaqa iyo Is-abaabulka. Wasiirada ama Wasiir-ku-xigeenadu ma qaban karaan shaqo kale oo ka baxsan tan Qaranka.
Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa qeexaya hab-socodka mashruuc-sharci, waana in uu muujiyaa mudnaanta gaar ah ee ay Ieeyihiin mashruuc-sharciyada la xidhiidha maaliyadda iyo kuwa Xukuumaddu u aragto degdeg, kuwaas oo mudan in iyaga la hormariyo. Sidoo kale waxay ka hortegaysaa fisqiga iyo anshax- xumada. Maxamadaha Somalilabd ee Gobolladda. Golaha Wakiilada waxa Ia kala diri karaa: